30 Askari Itoobiyaan ah Oo Ku Dhintay Qarax lagula Beegsaday Gobolka Baay.
Sunday March 04, 2018 - 10:47:38 in Wararka by Super Admin
Khasaara xooggan ayaa ciidanka Itoobiya kasoo gaaray qarax saacadihii lasoo dhaafay lagula beegsaday deegaano dhaca Koonfur galbeed dalka Soomaaliya.
Ugu yaraan hal gaari ayaa ciidanka Itoobiya looga gubay gobollada Bay iyo Baay waxaana jira dhimasho iyo dhaawac soo gaartay ciidamada gaadiidkooda la qarxiyay.
Wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in qarax ciidanka gumeysiga Itoobiya lagula eegtay duleedka deegaanka Awdiinlle uu sababay burburka gaari nuuca Uuraalka loo yaqaana ah, dadka deegaanka ayaa sheegay in qaraxu uu haleelay kolonyo gaadiid ah oo ka amba baxday magaalada Baydhabo kunasii jeeday dhanka degmada Bardaale ee isla gobolka Baay.
War kasoo baxay xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 30 Askari Itoobiyaan ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaraxa, Al Shabaab waxay xaqiijisay in gabi ahaanba uu burburay gaariga Uuraalka ah ee qaraxa lala beegsaday.
ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in qaraxu uu si dhameystiran uburburiyay gaarigii Uuraalka ahaa ee uu haleelay, ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa isku gedaamay goobta qaraxu ka dhacay waxayna jiiteen gaarigii laga gubay.
Waa weerarkii 2-aad oo askar badan looga laayo ciidamada shisheeye ee ka dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya, Maalin ka hor ayuu weerar cagta lagu mariyay ciidamada Burundi ka dhacay duleedka degmada Balcad oo dhanka waqooyi uga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.